OKANO LUBRICANT | Made in Japan の高品質エンジンオイルを世界の車に！
100% SYNTHETIC အင်ဂျင်ဝိုင်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်
OKANO LUBRICANT များအား ဂျပန်နိုင်ငံရှိ ကုမ္ပဏီသက်တမ်း နှစ် (၁၀၀) ကျော်ရှိပြီဖြစ်သော OKANO JIDOUSHA CO., LTD. မှ ထုတ်လုပ်ပြီး LOTUS BLOSSOM CO., LTD. မှ မြန်မာနိုင်ငံ၏ တစ်ဦးတည်းကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် တင်သွင်းဖြန့်ဖြူး ရောင်းချပေးလျှက် ရှိပါသည်။
OKANO LUBRICANT တိုင်းသည် 100% Synthetic ဖြစ်ခြင်း၊ American Petroleum Institute (API) လက်မှတ်ရ နောက်ဆုံးပေါ် နည်းပညာဖြင့် စံနှုန်းပြည့် ထုတ်လုပ်ထားခြင်း၊ ထုတ်လုပ်မှုအဆင့် အားလုံးကို ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ပြုလုပ်ထားခြင်း စသည်တို့ကြောင့် ယုံကြည်စိတ်ချစွာဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
မော်တော်ယာဉ် စက်သံသိသာစွာ ညက်ညောသွားခြင်း။
မော်တော်ယာဉ်၏ ဆွဲအား ပိုမိုတိုးတက် ကောင်းမွန်လာစေခြင်း။
အင်ဂျင်အတွင်းစက်အစိတ်အပိုင်းများအချင်းချင်းပွတ်တိုက်မှု၊ တိုက်စားပျက်စီးမှုကို လျော့ပါးစေခြင်း။
အင်ဂျင်အတွင်းပေါက်ကွဲမှုကြောင့် အင်ဂျင်ဝိုင်ဂျိုးများဖြစ်ပေါ်ခြင်းကို ကာကွယ်ဟန့်တားပေးခြင်း။
အင်ဂျင်သက်တမ်းကို ပိုမိုကြာရှည်စွာ သုံးစွဲနိုင်ခြင်းစသည့် အကျိုးကျေးဇူးများကို ရရှိနိုင်စေမည် ဖြစ်ပါသည်။
ACEA　C3　5W-30　SN
ACEA standard is established by European car 15 manufacturers including VW, BMW, Volvo, European Toyota.
C category is in the ACEA standard that emphasizes engine protection performance,SAPS(sulfur, soot, phosphorus sulfate) is less regulated than the conventional AB category, so it is most suitable for clean diesel cars and DPF (after the exhaust gasaprocessor) vehicles.
ACEA C3 Standard compliant product SN 5W-30
OKANO LUBRICANT – 100% Synthetic Advance Engine Oil
Q0 (SN/GF-5) 0W 20
- ဆီစွမ်းအင်ကို အမြင့်မားဆုံးနှင့် အကျိုးအရှိဆုံးဖြစ်ပေါ်ရရှိစေရန် စေးပျစ်မှုကို လျော့ချထုတ်လုပ် ထားသော အင်ဂျင်ဝိုင် ဖြစ်ပါသည်။
- Hybrid ကားများ, Fuel Efficient ကားများနှင့် နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသော ကားများအား အမြင့်မားဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ကို အပြည့်အ၀ပေးစွမ်းမည့် အင်ဂျင်ဝိုင်ဖြစ်ပါသည်။
- VHVI Oil အား အသုံးပြုထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် ဆီသားညီညွတ်မျှတစွာ ပို့ဆောင်ပေး၍ အပူဒဏ်ခံနိုင်စွမ်းမြင့်မားပြီး အင်ဂျင်၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အမြင့်မားဆုံးသို့ ရရှိစေပါသည်။
Q5　5W-40　SN/CF
OKANO LUBRICANT – 100% Synthetic Engine Oil
Q6 (SN/CF) 10W 40
- Premium Quality အဖြစ် အရည်အသွေး မြင့်မားသော ဆီသားနှင့် အဆင့်မြင့် Additive များ၏ နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာများနှင့် ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ထားသော အင်ဂျင်ဝိုင် ဖြစ်ပါသည်။
- အင်ဂျင်လည်ပတ်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော အင်ဂျင်အပူချိန်မြင့်မားလာမှုနှင့် အင်ဂျင်ဆွဲအားနှင့် ရုန်းအားဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး အောက်စီဂျင်ပေါင်းစပ်ဖြစ်စဉ်အား တည်မြဲစေသည့် အင်ဂျင်ဝိုင်ဖြစ်ပါသည်။
Q7 (SN/GF-5) 5W 30
- Superior Quality အဖြစ် ပွတ်တိုက်မှုနည်းပါးသော အင်ဂျင်များအတွက် အထူးထုတ်လုပ်ထားသော အင်ဂျင်ဝိုင် ဖြစ်ပါသည်။
- အင်ဂျင်၏ ကြံ့ခိုင်မှုနှင့် သက်တမ်းကို ပိုမိုကြာရှည်စေသည်။
- ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမှ ကာကွယ်ပေးပြီး မိုင်ပေါင်းများစွာထိ အင်ဂျင်ဝိုင်လဲလှယ်ရန် မလိုပဲ သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။
- အထူးအားဖြင့် ဆီစားသက်သာစေသည်၊ အင်ဂျင်အတွင်းပိုင်းကို အမြဲသန့်ရှင်းနေစေသည်၊ အင်ဂျင်ပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပါသည်။
Q8 (SN/GF-5) 10W 30
- Super Quality အဖြစ် ထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် အင်ဂျင်တွင်းရှိ အစိတ်အပိုင်းအချင်းချင်း ပွတ်တိုက်မှု၊ တိုက်စားပျက်စီးမှုဒဏ်နှင့် မြင့်မားသော အပူချိန်ဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော အင်ဂျင်ဝိုင် ဖြစ်ပါသည်။
- မော်တော်ယာဉ်အမျိုးအစား မြောက်များစွာတို့တွင် သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။
- အထူးအားဖြင့် ဆီဖိုးကုန်ကျစရိတ် သက်သာစေသည်၊ ပင်စတင်များကို သန့်ရှင်းမှု ရှိစေသည်၊ မြင့်မားသော အပူချိန်၌ပင် အောက်စီဂျင်ပေါင်းစပ်ဖြစ်စဉ်အား တည်မြဲစေသည်။
Q9+ (CI-4) 15W 40
- ဒီဇယ်သုံး မော်တော်ယာဉ်များနှင့် လုပ်ငန်းသုံးယာဉ်ကြီးများ သုံးစွဲနိုင်ရန် အထူးထုတ်လုပ် ထားသော အင်ဂျင်ဝိုင်ဖြစ်ပါသည်။
- Heavy Duty Diesel Engine Oil ဖြစ်သောကြောင့် လူစီး (Express) ယာဉ်ကြီးများ၊ ဒီဇယ်သုံး Heavy Duty Truck ယာဉ်ကြီးများ၊ လုပ်ငန်းသုံး Truck ယာဉ်ကြီးများတွင် သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။
- OKANO Q9+ Engine Oil ကို ဒီဇယ်ဆီ၊ CNG သုံး မော်တော်ယာဉ်များတွင် သုံးစွဲနိုင်အောင် အထူးစီမံ ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။
- အင်ဂျင်အတွင်း စက်အစိတ်အပိုင်းများအချင်းချင်း ပွတ်တိုက်မှု၊ တိုက်စားပျက်စီးမှုကို လျော့ပါး စေနိုင်ပြီး ဒီဇယ်အင်ဂျင်တွင်း ပေါက်ကွဲမှု၏ အပူချိန်နှင့် ဖိအားကို ခံနိုင်ရည်ရှိအောင် အဆင့်မြင့် နည်းပညာများဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။
OKANO LUBRICANT – 100% Synthetic Transmission Fluid
MULTI type of CVT
- Toroidal CVT အမျိုးအစားမှလွှဲ၍ အခြား CVT ကားမျိုးစုံတွင် ကျယ်ပြန့်စွာဖြင့် သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။
- Synthetic Oil အား အသုံးပြုထုတ်လုပ်ထားခြင်းကြောင့် သတ္တုခြင်း ပွတ်တိုက်စားမှုကို ကာကွယ်ပေးပြီး ဂီယာဘောက်၏ အမြင်မားဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ကို ရရှိစေပါသည်။
- ယာဉ်၏ အမြင့်ဆုံးအရှိန်တွင်ဖြစ်စေ၊ အနိမ့်ဆုံးအရှိန်တွင်ဖြစ်စေ ဟန်ချက်ညီမျှ ထိန်းညှိမှုကို ရရှိစေပါသည်။
OKANO LUBRICANT – 100% Synthetic
ATF & PSF ( JASO1A )
- JASO1A ( GM Corporation ၏ Dexron IIIH နှင့် FORD Company ၏ MERCON ) Standard Quality နှင့်အညီ ထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် မော်တော်ယာဉ်အမျိုးအစား အမြောက်အများတွင် သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။
- Antioxidant and Friction Preventive Formula ကို အသုံးပြုထားသောကြောင့် ယာဉ်ဆွဲအားကို သိသာစွာ တိုးတက်စေပြီး ဆီစားသက်သာစေခြင်း၊ စက်အစိတ်အပိုင်းအချင်းချင်း ပွတ်တိုက်မှုကို လျော့နည်းညင်သာ ချောမွတ်စေခြင်း စသည့် အကျိုးကျေးဇူးများကို ရရှိစေပါသည်။
Product အဖြစ် အဆင့်မြင့်စွာ ထုတ်လုပ်ထားပြီး Power Steering Fluid (PSF) အဖြစ်ပါ စိတ်ချယုံကြည်စွာ သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။ ( CVT ကားများတွင် မသုံးစွဲနိုင်ပါ။ )
Super Ester (スーパーエステル)　エンジン用
Super Ester (スーパーエステル)　ミッション用
Long Life Coolant (ロングライフクーラント)
OKANO LONG LIFE COOLANT は高品質エチレングリコールを主成分とし、 高機能防錆剤と消泡材をバランスよく配合してあるので、防錆性能と使いやすさが 両立されています。
2014年2月6日ミャンマーのRoyal gardenにてOKANO LUBRICANTの製品発表会を開催！
ミャンマーでの代理店【LOTUS BLOSSOM CO.,LTD】関係各位、それに４０社の新聞・ＴＶなどのメディア関係者が詰めかけて大々的なものになりました。
OKANO LUBRICANT はレースシーンで活躍するチームの応援をしています。
（annual award more details）
The overseas handling agency
★★★ ★★★Solo Sales Agency★★★ ★★★
●Myanmar Lotus Blossom co .,ltd
NO. 23, PARAMI ROAD, 10 WARD,MAYANGONE TOWNSHIP, YANGON.
●Taiwan　 Hyracing International Company （驊藝國際有限公司）
No.130, Sec. 2, Zhonghua Rd.Tucheng Dist., New Taipei City, 23673 Taiwan (R.O.C.)
TEL:+886-9-58436917　sales Manager ：Melody - HUNG
●China　 Guangzhou Nidavi Technology Co.,Ltd（广州市尼达维科技有限公司）
Room 1803,Building 1,No. 16,Yongfa Road,Huadu,Huadu District,Guangzhou
Tel：18665733434 sales Manager ：Cai Yun Wen
★　★　Overseas Dealer ★　★
●Malaysia G International Trading Sdn. Bhd.
●New Zealand Global Trade Service co.,ltd
●Australia Import Revolution
We accept business sales, Looking for domestic and overseas sales agents.
feel the real made in Japan quality !
we promise your solo sales!
Seller　Okanojidoushashoukai co.,Ltd　http://www.okanojidousha.co.jp/
三重県度会郡玉城町中楽693-1　電話0596-24-2547 FAX 0596-21-0054
WEBSITE www.okanojidousha.co.jp E-mail global.okano@gmail.com
Copyright ©OKANO JIDOUSHA CO.,LTD ALL RIGHTS RESERVED.